Prof. Cali Khaliif Galaydh Oo Aas Qaran Muqdisho loogu Sameeyey Iyo Masuuliyiintii Dowladda Ee Ka Qeybgalay | Hayaan News
Prof. Cali Khaliif Galaydh Oo Aas Qaran Muqdisho loogu Sameeyey Iyo Masuuliyiintii Dowladda Ee Ka Qeybgalay
Muqdisho(Hayaannews):- Alle ha u naxariistee Ra’iisal-wasaarihii hore ee Soomaaliya Marxuum Cali Khaliif Galaydh,ayaa maanta Magaalada muqdisho si heer qaran ah loogu aasay,kadib markii uu khamiistii ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Aaska ka hor waxaa lagu qabtay Salaadda Janaasada mid ka mid ah hoolasha garoommada ciidammada cirka ee xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho.
Aaskan Qaran ee loo sameeyay Marxuum Cali Khaliif Galeydh dadka kasoo qeyb galay waxaa ka mid ahaa: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, Ra’iisul Wasaare kuxigeenka XFS Mudane Mahdi Maxamed Guuleed, Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed, Wasiiro, Xildhibaano, Ehelada Marxuumka, Odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Waddooyinka qaar ayaa maanta xidhnaa, sababo amni oo ahaa meelihii la marsiinayey maydka Cali Khaliif Gallaydh. Waxaana lagu aasay xabaalo ku yaalla cusbitaalka ay leeyihiin ciidammada xoogga ee Soomaaliya. Marxuumka ayaa ku geeryooday magaalada Jigjiga Khamiistii, halkaas oo uu socdaal shakhsiya u joogay.
Waxaana habka loo aasay ka muuqatay habka loo aaso dadka u dhintay cudurka Covid-19. Qaar ka mida ehelka Cali Khaliif Gallaydh oo BBC-da hore ula hadlay, ayaa sheegay in geerida Cali Khaliif loo aaneynayo cunto uu ku xanuunsaday oo aanay rumeysneyn in uu u dhintay cudurka Covid-19.
“Covid-19 waa naloo sheegay in uu u geeriyooday laakiin anagu arrintaas mid aan aamisanahay ma aha”, ayuu yidhi. Waxayna intaas ku dareen in ay codsanayaan in dib loogu baadho maydkiisa.
Barfasoor Galaydh wuxuu ku dhashay magaalada Laas-Caanood ee gobolka Sool, 15-kii bishii October ee sannadkii 1941-kii, halkaasoo uu ku soo qaaday qeybihii hore ee noloshiisa dhallaannimo iyo waxbarashadiisa aasaasiga ah.
Waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu degmada Sheekh ku dhammeystay sannadkii 1962-kii. Heerka aqoonta maaddiga ah – oo uu qeybo ka mid ah kusoo qaatay Jaamacado dibedda ku yaalla – wuxuu ka gaadhay illaa derajada PhD, wuxuuna bare ka noqday Soomaaliya.
1963-kii, Marxuum Galaydh wuxuu helay deeq waxbarasho oo ay siisay Jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka. Wuxuu Shahaadada heerka koowaad ee maaddada Seyniska Siyaasadda ka qalinjebiyay sannadkii 1965-kii.
Shahaadadaas wuxuu diiradda ku saaray cilmiga maamulka dadweynaha, wuxuuna kasoo baxay dhammaan shuruudihii looga baahnaa inuu barfasoor ku noqdo. Buuggii uu derajadiisa aqooneed ku difaacanayay wuxuu qoray 1971-kii iyo 1972-kii.
Intii u dhaxeysay 1974-kii ilaa 1976-kii wuxuu agaasime ka ahaa mashruucii Sokorta ee Jowhar (SNAI). 1976-kii ilaa 1982-kii wuxuu maamulayay mashruucii sokorta ee Juba (JSP).
Ka hor inta aan loo magacaabin xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, sanadkii 2000, wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii lagu yagleelay shirkii Carta. 13 bilood markii ay dhisneyd xukuumaddii uu Ra’iisul Wasaaraha ka ahaa, xildhibaannada baarlamaanka ee xilligaas ayaa kala noqday codka kalsoonida.
Sanadkii 2014-kii, Cali Khaliif waxaa loo doortay madaxweynaha maamulkii la magac-baxay Khaatumo ee gobollada Sool iyo Sanaag.
Doorasho dhacday bishii August ee sannadkaas, ayuu kaga guuleystay Maxamed Yuusuf Jaamac (Indho-Sheel), oo ahaa musharrax kula tartamayay xilka madaxweynaha Khaatumo.
In muddo ah ayuu u ololeynayay inuu maamulkiisa aqoonsi uga helo dowladihii tan iyo xilligaas soo maray Soomaaliya, hase-yeeshee uma suuragalin, wuxuuse markii dambe heshiis la galay Madaxweynihii hore ee Somaliland, kaas oo Khaatumo lagu qarameeyey, ka dib wadahadal muddo u dhexeeyey Somaliland iyo Khaatumo, waxaanu muddo daba-joogay hirgelinta qodobbadii heshiiskaas oo uu Madaxweynaha Somaliland ee hadda Muuse Biixi aanu fulinnin illaa hadda.